Les Chalets du Lac Grenier - Chalet Piccolo - I-Airbnb
Les Chalets du Lac Grenier - Chalet Piccolo
Le ndlu yokulala ezimbini yakhiwa ngo-2006. Le ndlu izuza kwimbono entle yechibi.
Ilali yaseChertsey yimizuzu eli-15 ukusuka kwindawo yethu yokuphumla ngemoto.
Ezilalini, uya kufumana ivenkile enkulu (evula ukusuka ngentsimbi yesi-8 ukuya kweyesi-9 ngokuhlwa yonke imihla). Kukwakho nekhemesti, isikhululo segesi, indawo yokubhaka, ivenkile yehardware, ibhanki kunye neCLSC.
Ngalo lonke ixesha, ukuba unesimo esiphuthumayo kwaye awukwazi ukunxibelelana nathi ngefowuni, unokufumana uncedo ngokuya kwindlu encinci ebomvu ekungeneni kwendawo yokungcebeleka (254 Grenier Nord) apho abasebenzi bethu uGuylaine noRobert bahlala khona.
Ngalo lonke ixesha, ukuba unesimo esiphuthumayo kwaye awukwazi ukunxibelelana nathi ngefowuni, unokufumana uncedo ngokuya kwindlu encinci ebomvu ekungeneni kwendawo yokungcebeleka…